5 zvinhu zvekusarudza iyo Kubata kweCommerce | ECommerce nhau
ari ecommerce mapeji vane zvido zvakasiyana zvachose pane a yakajairika webhusaiti kana blog. Chikamu chakanaka chavo vanoshandisa vanozivikanwa kwazvo eCommerce mapuratifomu senge PrestaShop kana Magento, izvo zvinoda zvimwe zvakasarudzika hunhu uye mashandiro. Neichi chikonzero, nhasi tinoda kutaura newe nezve iyo 5 zvinhu zvaunofanira kufunga kana uchisarudza eCommerce Hosting inoshanda neMagento kana PrestaShop.
1 1. Speed ​​uye yepamusoro kuwanikwa
2 2. Data centre muSpain
3 3 Kudzivirirwa
4 4. Kupfuura rutsigiro, unoda shamwari yehunyanzvi
5 5. Nharembozha
1. Speed ​​uye yepamusoro kuwanikwa
ari kurodha nguva muchitoro chepamhepo chinhu chakakosha kwazvo. Zvinozivikanwa kuti 47% yevatengi vanomirira kuti peji riite, 40% yavo, vachasiya saiti kana zvichitora nguva yakareba kuratidza. Naizvozvo, iyo Kubata kweCommerce iyo inosarudzwa, inofanirwa kuvimbisa kumhanya kwakaringana kwekushanda kweyemagetsi commerce chikuva.
Kana iwe uine chitoro chepamhepo chinogadzira zana ezviuru euros pazuva, kunyangwe 1 sekondi kunonoka kuwanikwa kweichi saiti kunogona kureva kurasikirwa kwezviuru zveeuro, chimwe chinhu icho mumusika wakakwikwidza wakadaro usingatenderwe.
Kana zvasvika pakutora chitoro kurodha nekukurumidza, zvinodikanwa izvo dhizaini yewebhu inoitwa seyazvinogona sezvinobvira. Asi zvakare kubata kune zvakawanda zvekutaura, kubvira iyo chaiyo server kumisikidzwa inoenderana neCMS Kushandisa chitoro kwakakosha pakuvandudza zvakanyanya mashandiro. Uye ngatirege kukanganwa kuti kurodha kumhanya kwewebhu webhusaiti chinhu cheSEO icho chiri kuramba chichiwedzera kukosha….
2. Data centre muSpain
Kana iwe uchizotengesa kuSpain saka zvakakosha kuti yako data centre inogarwa kuSpain. Izvi zvakakosha kubvira inovandudza zvemukati kurodha pasi nguva uchienda kune vatengi vako (ruzivo harufanire kufamba nzendo refu kubva kune inogona kuitisa muUSA) uye zvakare chimwe chinhu chinobatsirawo muSEO. Kana iwe ukatengesa kuSpain unofanirwa kuve neSpanish IP nekuti Google inoikoshesawo zvakanaka.
E-commerce masaiti akagadzirirwa kuti agone kugamuchira mari kubva kune vatengi vanotenga zvigadzirwa zvako. Izvi zvinoreva kuti ruzivo rwemari uye data remunhu rinofanirwa kugadziriswa uye harifanire kuve munjodzi. Naizvozvo, iyo Kubata iyo inosarudzwa inofanirwa kupa iyo Yakavanzika SSL yekuwedzera kuchengetedzeka uye kuvimba kwevatengi. Kuchengetedza ruzivo rwekadhi rechikwereti, pamwe nemameseji uye mapassword, kunyangwe uchipa mbiri-chinhu chechokwadi, zviri pachena kuti zvinhu zvekutengeserana zvese zvinofanirwa kupa vatengi vayo.
4. Kupfuura rutsigiro, unoda shamwari yehunyanzvi
Kuti yako yekubatira kambani inokupa iwe yemhando rutsigiro chinhu chakanyatsodiwa. Asi kana iwe uchida kuenda mberi haufanire kungotsvaga yakatsigirwa kune matambudziko asi iwe unoda kuitisa kuti uve wako tekinoroji shamwari. Nhasi kune vazhinji vanogamuchira avo vari nyanzvi mukumisikidza, kumisikidza uye kugadzirisa kweMagento nePrestaShop, vane ruzivo rwakakwira rweSEO, nezvimwe. Muchidimbu, ivo vanokwanisa kupa yakazara mhinduro kune zvese zvinodiwa zvebhizinesi rako. Muenzaniso wakanaka weiyi vanhu vari paProfessionalHosting vanopa zvakanyanya nyanzvi yekutambira Magento Chemhondoro ye PrestaShop.
Zvinozivikanwa kuti vanhu vazhinji vari kuwana Indaneti kuburikidza nenharembozha dzavo dzakaita seMatafura kana maSmartphone, vazhinji vacho vachitotenga. Naizvozvo, yakanaka eCommerce yekutambira mupi inofanira kupa yakasarudzika rutsigiro rwe gadzirisa uye gadzirisa yako webhusaiti kune nhare. Maitiro aya haamiswe, saka mune ramangwana vazhinji vevatengi vako vanozotarisa nefoni yavo kana piritsi uye webhusaiti yako inofanira kugadzirira kupa sevhisi yemhando yepamusoro. Kana iwe unoda kurasikirwa rese iro bhizinesi?
Pamwe chete nezvose zvataurwa pamusoro apa, hatifanire kukanganwa zvimwe zvakakosha mu kusarudza yakasarudzika Hosting yekutengesa zvinhu zvemagetsi, kusanganisira:
Simba rakawandisa uye zvigadzirwa zvekudzivirira zvinogona kukundikana
Yakaderera lactation uye zvibvumirano zvekubatanidza kukwidzirisa kumhanyisa kumhanya
State-of-the-art mawebhu sevha
Email maakaunzi uye kudzivirira spam
Yakagadziriswa IP kero
Maseva anoenderana nePCI (Kubhadhara Kadhi Indasitiri)
Isu tinoshuvira kuve yerubatsiro kana zvasvika kune sarudza yako yekutambira eCommerce.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » nemitambo » 5 zvinhu zvekufunga nezvazvo pakusarudza eCommerce Hosting
Chinyorwa chinonakidza kwazvo. Inoenda kunongedzo neaya maficha anofanirwa kutarisirwa mune yedu e-commerce. Izvo zvakakosha kuti ubvunze neanopa wekutambira kune yega yega yezvinhu izvi kuve nechokwadi chekuti online chitoro chichava nerutsigiro rwakakwana uye zvese zviwanikwa zvainoda.
Pindura kuna Axarnet
Zvikonzero zvikuru nei Ecommerce yako ichikundikana